ဒါ​က​တော့ ​အ​ခု​နောက်​ပိုင်း ​လူ​သုံး​များ​လာ​တဲ့ ​ဖိုင်​ခွဲ​တဲ့ program ​တစ်​ခု​ပါ . win rar ​တို့ win zip ​တို့​နဲ့ ​ဖိုင်​ခွဲ​လို့​ရ​တာ​ပဲ . ​ပြန်​ဆက်​လို့ ​ရ​တာ​ပဲ​လို့ ​အ​တွန့်​တက်​လာ ​နိုင်​ပါ​တယ် . ​ဘာ့​ကြောင့် ​သူ့​ကို​မှ ​သုံး​ရ​တာ​လဲ​ဆို​ရင် win rar ​တို့ win zip ​တို့​နဲ့ ​ဖိုင်​အ​ကြီး​ကြီး (​ဥ​ပ​မာ DVD ​တစ်​ချပ်​ကို) 50 MB ​စီ​ရှိ​တဲ့ ​ဖိုင်​လေး​တွေ ​ပြန်​ခွဲ​ထုတ် ​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ hjsplit ​နဲ့​မှ ​မ​ဟုတ်​ရင် file ​ပြန်​ပြီး ​ဖြည်​တဲ့​အ​ချိန်​ကျ​ရင် error ​တွေ ​တက်​တတ်​ပါ​တယ် . Download ​လုပ်​တုန်း​က ​လုပ်​ပြီး​ခါ​မှ error ​တက်​နေ​ရင် ​ရင်​ကျိုး​ရ​ချည်​ရဲ့ ​မ​ဟုတ်​ဘူး​လား . ​အ​ခု ​ဒီ​ကောင်​လေး​က ​ဘာ error ​မှ ​မ​ဖြစ်​ဘဲ​နှင့် ​အ​ကောင်း​ဆုံး ​ခွဲ/​ဆက် ​အ​လုပ်​ကို ​လုပ်​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ် . ​သူ့​ကို Install ​လုပ်​စ​ရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး . ​သူ့​ကို ​အ​သုံး​ပြု​နည်း​ကို ​အ​ရင်​က ​ရေး​ခဲ့​ပြီး​ပါ​ပြီ . ​သူ​နဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ခွဲ​ထုတ်​ရင် ​နောက်​ဆုံး​က 001, 002,003 ​အဲ့​လို​မျိုး ​ဆုံး​ပါ​တယ် . ​အဲ့​တော့ ​အ​ကြမ်း​ဖျင်း ​သိ​ထား​ရ​မှာ​က .rar ​နဲ့​ဆုံး​ရင် win rar ​နဲ့ ​ဖိုင်​ခွဲ​ထား​တယ်၊ .zip ​နဲ့ ​ဆုံး​ရင် win zip ​နဲ့ ​ဖိုင်​ခွဲ​ထား​တာ၊ ​အဲ 001, 002,003 ​နဲ့ ​ဆုံး​နေ​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​မြင်​ရင် ​ဘာ​မှ​မ​တွေး​နဲ့ ​အဲ့​ဒါ hjsplit ​နဲ့ ​ဖိုင်​ခွဲ​ထား​တာ ​အဲ့​တော့ hj split ​နဲ့​ပဲ ​ပြန်​ဆက်​လို့​ရ​မယ်​လို့ ​သိ​လိုက်​ရင် ​အို​ကေ​သွား​ပါ​ပြီ .
ARROW January 25, 2010 at 1:00 PM
rar ​နဲ. ​ဘယ်​လို​ဖိုင်​ပြန်​ဆက်​လဲ​ဆို​တာ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​လား။
kyawkyaw July 31, 2011 at 3:56 PM
​ကို​ညီ ​ရေ ...​အ​သုံး​ပြု​ပုံ​လေး...​ပြော​ပြ​နိုင်​မ​လား​ခင်​မျာ...
​ဝင်း​နိုင်​ဦး (​ထား​ဝယ်) May 12, 2012 at 9:46 PM